भक्ती दर्शन टेलिभिजन » सभापोखरीमा वर्षौदेखि भेटी संकलन नहुँदा लाखौँ रूपैयाँको नष्ट Free songs
सभापोखरीमा वर्षौदेखि भेटी संकलन नहुँदा लाखौँ रूपैयाँको नष्ट
काठमाडौं, २५ साउन । संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकास्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सभापोखरीमा वर्षौदेखि भेटी संकलन नहुँदा लाखौँ रूपैयाँ खेर गइरहेको छ ।
दर्शन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट आएका भक्तजनहरुले चढाएको भेटी संकलन नहुँदा लाखौँ रूपैयाँ खेर गइरहेको हो । पोखरीका पुजारीका अनुसार त्यस पोखरीको दर्शन गर्न हरेक वर्ष ४ हजार भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजन तथा पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । दैनिक आउने भक्तनजले चढाएको पैसा संकलन गर्न हालसम्म कुनै पनि समिति बन्न नसकेको पुजारीले बताएका छन् ।
उनी वि. सं. २०१५ सालदेखि सो पोखरीमा पूजारीका रुपमा रहदै आएका छन् । पोखरीमा भेटीमात्र नभई फोहोरको थुप्रो समेत थुप्रीन थालेको छ । पोखरीको आसपासमा दर्शनार्थी बस्नको लागि दुई वटा पार्टी निर्माण गरिएको छ भने एउटा पाटी निमार्णधीन अवस्थामा छ । सभापोखरी धार्मिक हिसाबले अत्यन्त पवित्र स्थान मानिन्छ ।
पोखरीमा जनै पूर्णिमाको दिन सबैभन्दा धेरै भक्तजनहरु पुग्ने गरेका छन् । किवंदन्तीअनुसार व्यासमुनिले सम्पूर्ण देवीदेवतालाई भेला गराएर यसै स्थानमा पुराण भनेका थिए। सन्तान नहुनेहरूले यहाँ पूजा गरेमा सन्तान हुने विश्वासका साथ श्रद्धालुहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन्। समुद्र सतहदेखि ४ हजार २४० सय मिटर उचाइमा रहेको यो पोखरी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेपनि संरक्षणमा हालसम्म कसैले चासो नदिदा ओझेलमा परेको छ । बहुमूल्य जडीबुटी, लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइने क्षेत्र भएकाले पनि राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक भएको स्थानीयको भनाई छ ।